ဆေးရုံအတှကျလူနာဦးခေါင်းယူနစ်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေး China Manufacturer
Hunan Eter Electronic Medical Project Stock Co., Ltd. [Hunan,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Middle East ထုတ်ကုန်:11% - 20% Cert:ISO13485, ISO9001, OHSAS18001, ASME, CE ဖေါ်ပြချက်:လူနာဦးခေါင်းယူနစ်,လူနာဦးခေါင်းယူနစ်စျေးနှုန်း,ဆေးရုံအဘို့စိတ်ရှည်ဌာနမှူးယူနစ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် > ပြန်လည်သက်သာလာခြင်းများအတွက်အိပ်ရာဌာနမှူးယူနစ် > ဆေးရုံအတှကျလူနာဦးခေါင်းယူနစ်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေး
ဆေးရုံအတှကျလူနာဦးခေါင်းယူနစ်များ၏ 1. အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စျေးနှုန်း ဖေါ်ပြချက်
အဆိုပါလူနာဦးခေါင်းယူနစ်မျက်နှာပြင် acrylic ပန်းချီသို့မဟုတ် electrostatic မှုန်ရေမွှားတွေနဲ့ကုသရာလူမီနီယံအလွိုင်းအပိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို dismount လုပ်ဖို့ panel က, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဘို့အသုံး built-in cabling လိုင်းများအားလျှပ်စစ်နှင့်အားနည်းလျှပ်စစ်မီးနှင့်ပြင်ပယိုစိမ့်ကာကွယ်, ရာဘေးမီးခွက်, ကျယ် Toggle အား switches များ, ငါးပေါက် Multi-function ကို socket, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ terminal ကိုနှင့် system တောင်းဆိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်တပ်ဆင်ထားသည် ။ အဆိုပါဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်လျော်သောအရောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဆေးရုံအတှကျလူနာဦးခေါင်းယူနစ်2.Reasonable စျေး အားသာချက်
ဆေးရုံအတှကျလူနာဦးခေါင်းယူနစ်3အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စျေးနှုန်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်။
အိပ်ရာ ဦး ခေါင်းယူနစ်
လူနာဦးခေါင်းယူနစ် လူနာဦးခေါင်းယူနစ်စျေးနှုန်း ဆေးရုံအဘို့စိတ်ရှည်ဌာနမှူးယူနစ် အိပ်ရာ ဦး ခေါင်းယူနစ် လူနာကုတင်ခေါင်းယူနစ်သည် လူနာခေါ် ဆို. စနစ် သူနာပြုခေါ်ရန်ဘဲလ်စနစ် သူနာပြုခေါ်ရန်ဘူတာစနစ်